Ihe 5 ịhọrọ Bochum maka eCommerce | ECommerce ozi ọma
na ibe ecommerce nwere mkpa dị iche iche karịa a ot nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog. Akụkụ dị mma n'ime ha na-eji nyiwe eCommerce ama ama dịka - PrestaShop ma ọ bụ Magento, nke choro njirimara na oru ndi ozo. Maka nke a, taa anyị chọrọ ịgwa gị gbasara Ihe 5 ị kwesịrị ịtụle mgbe ị na-ahọrọ Bochum eCommerce nke na-arụ ọrụ na Magento ma ọ bụ PrestaShop.
1 1. Ọsọ na nnweta dị elu
2 2. Ebe data dị na Spain
3 3. Nchedo
4 4. Karịa nkwado, ịchọrọ onye ibe teknụzụ
5 5. Mobile n'elu ikpo okwu
1. Ọsọ na nnweta dị elu
na oge nkwụnye ego na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ọ bụ akụkụ dị oke mkpa. A maara na 47% nke ndị na-azụ ahịa na-eche ka ibe ibu, 40% n'ime ha, ga-ahapụ saịtị ahụ ma ọ bụrụ na ọ na-ewe ogologo oge iji gosipụta. Yabụ, Bochum maka eCommerce ahọpụtara, ga-emerịrị ọsọ zuru oke maka arụmọrụ nke azụmaahịa kọmputa.
Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke na-ewepụta otu narị puku euro kwa ụbọchị, ọbụlagodi igbu oge nke 1 nke abụọ na nnweta saịtị ahụ nwere ike ịpụta ọtụtụ puku euro, ihe na ụdị asọmpi dị otú ahụ enweghị ike ịhapụ.
Mgbe ọ na-abịa ka ụlọ ahịa na-ebu ngwa ngwa, ọ dị mkpa na a na-eme nhazi weebụ dị ka o kwere mee. Mana nnabata nwere otutu ihe ikwu, ebe obu nhazi nkesa ziri ezi nke na-emegharị na CMS Iji ụlọ ahịa dị mkpa iji meziwanye arụmọrụ. Ma ka anyị ghara ichefu na loading ọsọ nke a website bụ SEO ihe nke na-aghọwanye ihe dị mkpa….
2. Ebe data dị na Spain
Ọ bụrụ na ị ga-ere na Spain mgbe ahụ, ọ dị mkpa na etiti data gị na Spain. Nke a dị mkpa ebe ọ bụ emeziwanye oge nbudata ọdịnaya kwupụta na ndị ahịa gị (ozi ahụ agaghị aga ebe dị anya site na enwere ike ị nweta Bochum na USA) yana kwa bụ ihe ọzọ na-enye aka na SEO. Ọ bụrụ na ị na-ere na Spain ị ga-enwe Spanish IP n'ihi na Google na-ejikwa ya kpọrọ ihe.
Ezubere ebe nrụọrụ E-commerce iji nwee ike ịnata ụgwọ site n'aka ndị ahịa zụrụ ngwaahịa gị. Nke a pụtara na a ghaghị ịhazi ihe ọmụma banyere ego na data onwe onye ma ghara ịbụ ndị na-adịghị ike. Ya mere, Bochum a hoputara aghaghi inye a Onwe SSL iji bulie nchebe na ntụkwasị obi ndị ahịa. Ichebe ozi kaadị akwụmụgwọ, yana logins na okwuntughe, ọbụnadị ịnye nyocha ihe abụọ, bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na usoro ịre ahịa ọ bụla kwesịrị inye ndị ahịa ya.
4. Karịa nkwado, ịchọrọ onye ibe teknụzụ
Na ụlọ ọrụ nnabata gị na-enye gị nkwado dị mma bụ ihe dị oke mkpa. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịga n'ihu, ị gaghị achọ naanị otu nkwado maka nsogbu kama Ikwesiri Bochum ka ị bụrụ onye ọrụ teknụzụ gị. Taa, e nwere ọtụtụ ndị ọbịa bụ ndị ọkachamara na ntinye, nhazi na njikarịcha nke Magento na PrestaShop, ndị nwere nnukwu ihe ọmụma nke SEO, wdg. Na nkenke, ha nwere ike inye azịza sara mbara maka mkpa azụmahịa gị niile. Ezigbo ihe atụ nke a bụ ndị nọ na ProfessionalHosting na-enye ọtụtụ ihe ọkachamara pụrụ iche maka Magento dị ka maka PrestaShop.
5. Mobile n'elu ikpo okwu
Amaara na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ na-abanye na Internetntanetị site na ngwaọrụ mkpanaka ha dịka Mbadamba ụrọ ma ọ bụ Smartphones, ọtụtụ n'ime ha na-azụ ihe. Ya mere, ezigbo ndị na-eweta Bochum eCommerce kwesịrị inye nkwado maka ahaziri maka imeghari na ebuli gị website maka mobile. Omume a enweghị ike ịkwụsị, yabụ n'ọdịnihu ọtụtụ ndị ahịa gị ga-eji ekwentị ha ma ọ bụ mbadamba ha na-agagharị na weebụsaịtị gị ga-adị njikere inye ọrụ dị mma. Ka ị chọrọ idafu azụmaahịa ahụ niile?
Tinyere ihe niile dị n'elu, anyị agaghị echefu ihe ndị ọzọ dị mkpa na ị na-ahọrọ Bochum pụrụ iche maka azụmahịa kọmputa, gụnyere:
Ike Redundant na akụrụngwa iji zere ọdịda
Low lactation na Njikọta nkwekọrịta-ebuli Nchaji ọsọ
Ọkaibe sava weebụ
Akpaghị aka nkwado ndabere na mpaghara
Akaụntụ email na igbochi spam
Edoziri adreesị IP
Servers kwekọrọ na PCI (Paykwụ Cardgwọ Kaadị mentlọ Ọrụ)
Anyị na-atụ anya ịbụ ndị enyemaka mgbe a bịara họrọ nnabata gị maka eCommerce.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » mba » Ihe 5 ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ Bochum maka eCommerce
Ihe na-adọrọ mmasị. Ọ na-aga na isi na akụkụ ndị ahụ a ghaghị iburu n'uche na e-commerce anyị. Ọ dị mkpa ịkpọtụrụ ndị na-eweta Bochum nke ọ bụla n'akụkụ ndị a iji jide n'aka na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ga-enwe nkwado zuru oke na akụ niile ọ chọrọ.
Isi ihe kpatara Ecommerce gị nwere ike ịda